China inoda yayo yega sisitimu yekushandisa uye inongoshandisa zvemuno Hardware uye software | Linux Vakapindwa muropa
Makambani maviri eChinese anoronga kugadzira kambani nyowani mune chinangwa chekugadzira itsva yekushandisa system, mapato maviri anoifarira ari China Standard Software Co., Ltd uye Tianjin Kylin Ruzivo Ltd. Co, idzo dzinoziva hukama kuhurumende.
Tianjin Kylin Ruzivo Ltd. Co ndiye musiki weKylin, inoshanda system zvichibva paFreeBSD yeChina Mauto uye yakatanga kuunzwa muna 2007, nepo China Standard Software Co. Ltd inomira kumashure kweNeoKylin, chigadzirwa chekudyidzana neNational University of Defense Technology. NeoKylin inoenderana neLinux kernel uye ndiyo inonyanya kufarirwa yeaviri mashandiro masisitimu ane vhezheni yematafura, maseva uye masisitimu akasimbwa pasi pemarezinesi ekutengesa uye emahara.
Iyo kambani nyowani kusikwa ichave ari pamusoro pekuvandudzwa kweiyo nyowani yekushandisa system, zvigadzirwa zvehunyanzvi, kushambadzira, manejimendi manejimendi, mari uye kutengesa. LMakambani maviri aya achasaina chibvumirano chepamutemo mune ramangwana. Shanduro dzazvino dzaKylin neNeoKylin dzichaumba hwaro hwesisitimu nyowani yekushandisa.
Mairi eIyo nyowani yekushandisa system inosanganisa iyo logo yazvino inoshanda sisitimu Kylin uye logo system yekushandisa NeoKylin. Makambani maviri haasati aburitsa zita reiyo nyowani yekushandisa system.
Yese kufamba uku kwakagadzirwa nekuti, mukati China yakagadzira kumwe kukurudzira mukushandisa matekinoroji emuno. Muchokwadi, mahofisi ehurumende akabvunzwauye kubvisa zvese zvekunze dhizaini Hardware uye software.
Sezvo ndichidya rangarira, pakati pegore, nhau dze , que mauto eChina anoronga kumira kushandisa mahwindo seyako sisitimu yekushandisa.
Mukutaura, maneja akagadzirirwa kubuda mukutsamira yeAmerican matekinoroji pakati pehondo yekutengeserana pakati peUnited States neChina.
Kubva pakati paNovember, manejimendi Trump yakaburitsa chirevo chitsva chinowedzera nguva yengoni nemazuva makumi mapfumbamwe (ikozvino kusvika Kukadzi 90) panguva iyo inobvumidza makambani eUS kuti aite bhizinesi neHuawei.
Nekudaro, maAmerican tech makambani akawana mwenje wakasvibira kubva kuWashington kuti utangezve bhizimusi neyeye smartphone mugadziri, asi zvinogona kunge zvakanyanyisa sezvo kambani parizvino iri kuvaka mafoni asina chip yeAmerican.
Zvinoenderana nezvakataurwa nevakawanda Huawei's yazvino Mate 30 yakapihwa muna gunyana Yakanga isina chip yakagadzirwa muAmerica. Nekudaro, chirevo chehutongi hwaTrump pakati paMay chingadai chakakonzera kuti Huawei ifambire mberi mukuderedza kuvimba kwayo nemakambani eUS.
Izvo zviri maererano nesoftware kuti iyo hofori yechiChinese inoenderera ichirwa, hazvo, muchokwadi, Huawei akaunza HarmonyOS (yayo inoshanda sisitimu) muna Nyamavhuvhu seimwe nzira kune Android kubva kuAmerican Google.
Mutsamba pfupi ichangoburwa, mugadziri weChinese anozivisa chinangwa chayo kushongedza zvimwe zvezvigadzirwa zvacho nehurongwa hwayo hwekushandisa. Nekudaro, zvinoita sekunge mafoni echiratidzo, makomputa uye mahwendefa, ari pakati pezvigadzirwa zvaro zvakakurumbira, haana kukanganiswa.
Naizvozvo, zvese zvinoratidza kuti Google's mobile operating system nemasevhisi ayo Gmail, Google Pay, Play Store, nezvimwewo) zvicharamba zviripo gore rinouya pane mafoni uye mahwendefa anogadzirwa neHuawei.
Pakupedzisira chinhu chete chakaitwa naTrump uye anti-China mutemo kuita masimba makuru aya kumhanyisa zvinhu kusiya kuvimba nezvigadzirwa zveAmerica uye vese avo vanobatwa neiyi hondo yekutengesa.
kubudikidza chikamu chepasi chehurongwa hwekushandisa chii chakarongerwa kusikwa haisati yaziviswa nazvino kuti ichazonyorwa kubva pakutanga here kana kuti ichava neimwe hwaro, ingave FreeBSD kana Linux. Kunyangwe China iri kudawo kuisa Linux padivi, kunyangwe hazvo iyo Russia yakazvisarudzira, saka ndiwo muenzaniso we Astra linux iyo ichave iri kunyange panhare mbozha vezvematongerwo enyika veRussia nemauto.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » China inoda yayo yega sisitimu yekushandisa uye inongoshandisa yemuno Hardware uye software
Ini handinzwisise kuti sei chinyorwa ichi chichiti Kylin yakavakirwa paMaharaBSD https://www.ubuntukylin.com/index.php?lang=en iyo yekuChinese inoshanda sisitimu yakavakirwa paUbuntu uye zvakare iri chikamu che "kuravira kweUbuntu" https://ubuntu.com/download/flavours
Usakanganise sezvo imwe iri "Ubuntu Kylin" uye imwe yacho iri "Kylin" iwe yaunogona kubvunza https://es.wikipedia.org/wiki/Kylin kana iyo webhusaiti yehurongwa http://www.kylinos.cn/
Ini ndanga ndichitarisira kuverenga nezve Deepin kuti kusvika nguva pfupi yadarika yaienda kubva pasimba kuenda pasimba.
Zvinoita senge kwandiri nzira isina musoro yekushandura Linux kuita chishandiso chezvematongerwo enyika, ndinonzwisisa mafambiro eWestern zviri pamutemo asi iyo haisi Linux kana chero chinhu, asi unix yevanhu: D
Linux inoda chikuva kuti ibudirire, izvi ndizvo zvinotendwa naTobias Bernard